Firefox Task Manager: tarisa chii chakanganisika nebrowser | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichiona kuti chimwe chinhu hachishande zvakaringana paPC yedu, kana ndizvo zvandinoita, uyo akajaira kuita kwakanaka uye nekumhanyisa, isu tinotarisa zviri kuitika pane system yekutarisa. Kubva pairi tinogona kuona izvo zviri kutora RAM, CPU uye mamwe ma parameter, uye kubva kuchishandiswa pachawo tinogona kumanikidza kuvhara kwayo kana kuuraya maitiro. Kana chete chinhu chinotitadza iri bhurawuza, tinogona kutarisa iyo Task Manager senge iyo inosanganisira Firefox.
Chinhu chekutanga chandinoita kana ndikaona chimwe chinhu chisingazivikanwe kutarisa paapp system yekutarisa kuziva izvo zvinoshandisa zviwanikwa uye, kana Firefox iri kurodha chikamu changu, ipapo ini ndaizotopinza iyo Yekubhurawuza Task Manager. Kuti tiuwane isu tine sarudzo mbiri: yekutanga ndeye nyora mu url bar nezve: kuita (nezve kuita); yechipiri kuenda kune hamburger (sarudzo) / Zvimwe / Task maneja.
Task maneja kuti uone kuti ndeapi mapeji eFirefox kana ekuwedzeredza anorema zvakanyanya
Kamwe mukati, zvatichaona chichava chimwe chinhu senge chauinacho mune iyo skrini inotungamira ino chinyorwa: ese akavhurika matabhu uye ekuwedzera atakaisa. Kufunga kuti Firefox yangu yakanga yakaipa, iyo yakanga isiri iyo, mhosva ingadai yakave iri LinuxAdictos WordPress mupepeti, sezvo isiri imwe yemapeji akareruka pasi rose. Kune rimwe divi, iyo pani yekudzora yeiyo blog pachayo haidye kana cheshanu cheizvo mupepeti anoshandisa. Nekudaro, mune ino kesi uye kana timu yangu ikatambura, ini ndaizofanira kudzivirira kuvhura akawanda matabhu neiyo WordPress mupepeti. Kana, kana Firefox yapotsa yakaturikwa, edza vhara mupepeti nekudzvanya pane iyo sarudzo uyezve pa X inowanikwa kurudyi.
Kana isu tine mapeji akati wandei akavhurwa kubva kune imwechete saiti, ivo vanozoonekwa pamutsara mumwe uye isu tichafanirwa wedzera iyo nekudzvanya museve mudiki iyo inoonekwa kuruboshwe.
Iyo Firefox Task Manager inogona zvakare kutibatsira kuziva kana kuwedzerwa ndiko kuri kuita kuti hupenyu hwedu hutadze. Mune iyo skrini yandawedzera, hapana chinodya chero chinhu, asi ndinoziva kuti vashandisi vazhinji vanoisa akawanda kupfuura ini uye mumwe anogona kukuisa mukusungwa. Task Manager ichatitaurira kuti ndeupi kuwedzera kuri kuburitswa.
Ndinofunga ndizvo chishandiso chinogona kubatsira zvakanyanya uye pachangu ndaizoita kuti zvioneke, asi zvakanaka. Iripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Yako Firefox ine hunhu husina kutsarukana? Tarisa zvinoitika kwaari kubva kwake Task Manager
Mupiro wakanaka kwazvo, ini ndaisaziva kuita uku. Kune vamwe vese, isu tinogovana zvido zvedu mumawedzero, iwe unoshandisa maviri ekuwedzera andinoona akakosha (Ini handina basa nemakuki uye ublock matangiro)